Kwete Tourism, Hapana COVID, asi yemahara pakupedzisira: Iyo Republic yeNauru
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Nauru Kupwanya Nhau » Kwete Tourism, Hapana COVID, asi yemahara pakupedzisira: Iyo Republic yeNauru
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Health News • Nauru Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Hakuna nzvimbo dzakawanda dzakasara munyika ino, uko COVID isati yave nyaya, uye vari COVID mahara. Imwe iRepublic Republic yeNauru.
Nauru inoramba isingakoshe mukushanya kwenyika dzese.
Nauru chitsuwa chidiki uye nyika yakazvimiririra kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweAustralia. Iyo iri makiromita makumi mana kumaodzanyemba kweEquator.Recal reef yakakomberedza chitsuwa chose chakazara nemipendero.
Vagari - vangangoita zviuru gumi kusanganisira vasiri veNauruan huwandu hweanosvika. Chiuru
Iko hakuna nyaya dzeCoronavirus munyika, asi Hurumende yeUS iri kukurudzira kubaiwa jekiseni kana uchienda kuNauru
Kana uchitarisa kumusoro kwepasirese nyika paCoronavirus, imwe nyika yakazvimirira inogara isipo. Nyika ino iRepublic of Nauru. Nauru inzvimbo yechitsuwa muSouth Pacific Ocean
Vanhu veNauru vanoumbwa nemadzinza gumi nemaviri, sekufananidzirwa nenyeredzi ine gumi nembiri pamureza weNauru, uye vanofungidzirwa kuti musanganiswa weMicronesian, Polynesian, uye Melanesian dzinza. Mutauro wavo wekuNauruan asi Chirungu inotaurwa zvakanyanya sezvo ichishandiswa muhurumende nekutengesa zvinangwa. Dzinza rega rega rine ishe waro.
Iyo Nauru Mureza yakapusa uye yakajeka, iine mavara Navy Blue, Yero, uye White. Imwe yeaya mavara ane kukosha. Iyo Navy Blue inomiririra gungwa rakakomberedza Nauru. Mutsara weyero uri pakati peEquator nekuti Nauru iri padhuze neEquator ndosaka Nauru ichipisa zvikuru. Iyo chena gumi nembiri nyeredzi nyeredzi inomiririra gumi nemaviri marudzi eVanhu veNauru.
Ndosaka mureza weNauru wakatsvukuruka seizvi.
Kutanga kwemigodhi yephosphate uye kutumira kunze kwenyika muna 2005 kwakapa hupfumi hwaNauru kukurudzira kwakanyanya. Iyo yechipiri deposits yephosphate ine fungidziro yakasara yehupenyu ingangoita makore makumi matatu.
Dhipatimendi rakapfuma rephosphate rakawanikwa muna 1900 uye muna 1907 Pacific Phosphate Company yakatumira kutumirwa kwekutanga kwephosphate kuenda kuAustralia. Kusvika nanhasi kucherwa kwephosphate kwakaramba kuri sosi yeNauru yekuwana mari.
Musi wa31 Ndira izuva reRusununguko (Dzoka kubva pagore reTruk)
Zuva iri renyika rinopembererwa nehurumende, kuronga mitambo nemakwikwi ekwaya yemapazi akasiyana siyana ehurumende pamwe nezviridzwa. Zvakare, kune mabiko anoitirwa vechidiki pamoyo. (Kunyanya vakapona veTruk)
Musi wa17 Chivabvu izuva rebumbiro
Zuva iri rinopembererwa nechitsuwa chose chiine makwikwi enzira uye kumunda pakati penzvimbo shanu.
I1 Chikunguru ndiNPC / RONPhos Handover
Nauru Phosphate Corporation yakatora kuchera phosphate uye kutumira kuNauru mushure mekutenga kubva kuBritish Phosphate Commission. Ipapo RONPhos akatora chinzvimbo kubva kuNPC muna2008.
26 Gumiguru izuva reANGGAM
Angam zvinoreva kuuya kumba. Iri zuva renyika nderokurangarira kudzoka kwevanhu veNauruan kubva pamucheto wekutsakatika. Nharaunda yega yega inowanzo kuronga mhemberero dzayo sezvo zuva iri rinowanzo farirwa nemhuri uye nevadiwa.
Kana mwana achinge azvarwa iye / iye achatora nhaka yedzinza ravo kubva kudivi raamai vavo. Zvipfeko zvedzinza rega rega zvakasiyana izvo zvinobatsira kuziva mumwe nemumwe.
Chinyorwa chemarudzi gumi nemaviri Nauru:
Eamwit - nyoka / eel, inonyengera, inotsvedza, yakanaka pakunyepa uye kuteedzera masitaera.
Eamwitmwit - kiriketi / tupukanana, runako rusina maturo, hunyoro, neruzha runonzwika uye nenzira yakafanana.
Eaoru - muparadzi, anokuvadza zvirongwa, mhando yegodo.
Eamwidara - dragonfly.
Iruwa - mutorwa, mutorwa, munhu anobva kune dzimwe nyika, akangwara, akanaka, murume.
Eano - akananga, anopenga, anoda.
Iwi - inda (kutsakatika).
Irutsi - kudya kwevanhu (kutsakatika).
Deiboe - hove dema dema, inoodza moyo, munyengeri, maitiro anogona kuchinja chero nguva.
Ranibok - chinhu chakashambidzwa kumahombekombe.
Emea - mushandisi we rake, muranda, ane hutano, akanaka bvudzi, kubiridzira mune hushamwari.
Emangum - mutambi, mutambi
Kune ese maapplication ekunyorera anosanganisira ekushanyira vashandi vezvenhau, email chikumbiro chekupinda Nauru chinofanirwa kutumirwa kuNauru Immigration.
Madhora eAustralia ndiyo tendero yepamutemo muNauru. Kunze kwekune imwe nyika chero nzvimbo yekutengesa ichave yakaoma. Cash ndiyo chete nzira yekubhadhara muNauru.
Makadhi echikwereti / echikwereti haagamuchirwe.
Kune mahotera maviri, yehurumende-muridzi uye hotera yemhuri.
Pane dzimwe mbiri dzekugara dzekugara (yuniti mhando) idzo dzimba dzevanhu.
Inguva yezhizha muNauru, kazhinji kutenderedza ma20s akakwira - pakati pe30s. Zvipfeko zvezhizha zvinokurudzirwa.
Zvipfeko zvezhizha / zvekupfeka zvakajairika zvinogamuchirwa asi kana uchiita musangano nevakuru veHurumende kana kuenda kuchechi, zvinokurudzirwa kupfeka zvakafanira. Swimsuits haisi yakajairika muNauru, vanoshambira vanogona kupfeka sarong pamusoro pavo kana zvikabudura.
Iko hakuna chekufambisa chevanhu. Kubhadhara mota kunokurudzirwa.
Miti yemichero ndeinokonati, mango, pawpaw, lime, michero yechingwa, sopu inovava, pandanus. Iyo yemuno yakaoma huni muti weTomano.
Kune mhando yemiti yemaruva / miti asi yakanyanya kushandiswa / inofarirwa ndeye franjipani, iud, hibiscus, irimone (jasmine), eaquañeiy (kubva kutomano muti), emet uye yero mabhero.
VaNauru vanodya zvakasiyana siyana zvegungwa asi hove ichiri chikafu chinodiwa chevaNauruans - mbishi, yakaomeswa, yakabikwa.
Iko hakuna inozivikanwa COVID-19 kesi paNauru, hapana mishumo yakaitwa kuWorld Health Organisation, asi Hurumende yeUS inokurudzira mugari wayo kuti chinzvimbo ichi chisingazivikanwe chine njodzi, kunyangwe vafambi vakazara
Kune PCR uye / kana antigen bvunzo dzinowanikwa paNauru, mhedzisiro yakavimbika uye mukati memaawa makumi manomwe nemaviri.
Mushonga weOxford-Astra Zeneca uripo munyika
Nauru ane nyaya yenyika:
Pane imwe nguva, kwaive nemurume ainzi Denunengawongo. Aigara pasi pegungwa nemukadzi wake, Eiduwongo. Vaive nemwanakomana ainzi Madaradar. Rimwe zuva, baba vake vakamutora vakakwira naye pamusoro pemvura. Ikoko akafamba zvishoma kusvika asvika kumahombekombe kwechitsuwa, kwaakawanikwa nemusikana akanaka anonzi Eigeruguba.
Eigeruguba akaenda naye kumba, uye gare gare vaviri vacho vakaroora. Vaive nevanakomana vana. Dangwe rainzi Aduwgugina, wechipiri Duwario, wechitatu Aduwarage uye mudiki ainzi Aduwogonogon. Vakomana ava pavakakura kuva varume, vakave varedzi vakura. Pavaive vava varume, vaigara kure nevabereki vavo. Mushure memakore mazhinji, ivo vabereki pavakange vakura, amai vavo vakaita mumwe mwana mukomana. Ainzi Detora. Sezvo iye zvaaikura, aifarira kugara nevabereki vake uye nekunzwa storiyasi yavakaudza. Rimwe zuva, paakange ave kuda kuva murume, aive panze achifamba paakaona igwa. Akaenda kwavari, vakamupa hove duku duku; Akaenda nehove kumusha, akavapa. Zuva rakatevera, akaita zvimwechetezvo asi, pazuva rechitatu, vabereki vake vakamuudza kuti aende kunoraura nevakoma vake. Saka akaenda navo mungarava yavo. Pavakadzoka manheru iwayo, hama dzakapa Detora hove diki chete. Saka Detora akaenda kumba ndokuudza baba vake nezvazvo. Ipapo baba vake vakamudzidzisa kuredza, uye vakamuudza nezvasekuru vake, vaigara pasi pegungwa. Akamuudza kuti, chero nguva mutsetse wake paunonamira, anofanira kuudzingira pasi. Uye paakasvika kumba kwasekuru nasekuru vake, anofanira kupinda obvunza sekuru vake kuti vamupe hoko dzaaive nadzo mumuromo make; uye anofanira kuramba chero hoko dzinenge dzapihwa kwaari.
Zuva rakatevera, Detora akamuka mangwanani-ngwanani ndokuenda kuhama dzake. Vakamupa tambo yekuredza ine mapfundo mazhinji mairi, uye chidimbu chedanda rakatwasuka kune chirauro. Kunze kwegungwa, ivo vose vakakanda mitsetse yavo mukati, uye, nguva nenguva uye, hama dzaibata hove; asi Detora haana chaakabata. Pakupedzisira, akaneta uye mutsetse wake wakabatwa murwizi. Akaudza vakoma vake nezvazvo, asi ivo vakangomuseka. Pakupedzisira, akanyura mukati. Paaidaro, vakataura vega, 'Ibenzi rakadii iro hama yedu?' Mushure mekudonha mukati, Detora akasvika kumba kwasekuru nasekuru vake. Vakashamisika zvikuru vachiona mukomana akadaro achiuya kumba kwavo.
'Ndiwe ani?' vakabvunza. 'Ndiri Detora, mwanakomana waMadaradar naEigeruguba' akadaro. Pavakanzwa mazita evabereki vake, vakamugamuchira. Vakaisa mibvunzo yakati kuti kwaari, uye vakamuratidza mutsa mukuru. Pakupedzisira, paakange ave kuda kuenda, achirangarira zvaakaudzwa nababa vake, anokumbira sekuru vake kuti vamupe hoko. Sekuru vake vakamuudza kuti atore chero hoko dzaanofarira kubva padenga remba.
Nauru haina COVID-yemahara. Kubhururuka kwevhiki mbiri pakati peNauru neBrisbane, Australia inoramba ichishanda. Vese vafambi kuenda Nauru vanoda mvumo yekutanga kubva kuHurumende yeNauru.
Varume veDamo vakakanda mumitsetse yavo zvakare, uye panguva ino vakabata imwe mhando yehove. 'Anonzi ani uyu?' vakabvunza. Uye Detora akapindura, 'Eapae!' Zvakare zita racho raive iro chairo. Izvi zvakatsamwisa varedzi veDamo. Brora brothes akashamisika kwazvo nehungwaru hwake. Detora zvino akakanda mutsara wake ndokudhonza hove. Akabvunza varume veDamo zita rayo. Vakapindura 'Irum' asi pavakatarisa futi, vakaona kuti vaikanganisa, nekuti paive nemutema mutema kumagumo kwetambo. Zvakare Detora akakanda mumutsetse wake uyezve akavabvunza kuti vatumidze hove idzi. 'Eapae,' vakadaro. Asi pavakatarisa vakawana tswanda yenguruve kumagumo kwetambo yaDetora.
Parizvino varume veDamo vakatya zvikuru, nekuti vakaona kuti Detora aishandisa mashiripiti.
Ngarava yaDetora yakakweverwa padhuze neiyo, uye iye nehama dzake vakauraya varume veDamo ndokutora zvese zvavo zvekuredza. Vanhu pamhenderekedzo pavakaona zvese izvi, vakaziva kuti varume vavo vaive vakundwa mumakwikwi ehove, nekuti yaive tsika mumazuva iwayo kuti vakundi vemakwikwi ehove akadaro vauraye vadzivisi vavo uye vatore nhumbi dzekuredza. Saka vakatuma rimwe igwa. Izvo zvakafanana zvakaitika sepakutanga, uye vanhu veDamo vakatya zvikuru ndokutiza kubva kumahombekombe. Ipapo Detora nevakoma vake vakadhonza chikepe chavo vakananga kumahombekombe. Pavakasvika kune reef, Detora akasimudza chikepe nehama dzake ina pasi; igwa rakashanduka kuita dombo. Detora akamhara ega pachitsuwa. Pasina nguva, akasangana nemurume akamupikisa kumakwikwi e catchingearamae nehove pane reef. Vakaona imwe uye vese vakatanga kuitandanisa. Detora akabudirira kuibata, achibva auraya mumwe murume ndokuenda. Kure kumberi kwemahombekombe, Detora akahwina mumakwikwi zvakare, ndokuuraya murwi wake.
Detora zvino akatanga kutarisa chitsuwa ichi. Achiva nenzara, akakwira mukokonati ndokudonhedza pasi nzungu dzakaibva, mukaka waakamwa. Nemashanga ekokonati, akagadzira moto mitatu. Apo moto waibvira zvakajeka, akakanda imwe nyama yekokonati pamusoro, uye izvi zvakaita munhuwi unotapira. Ipapo akarara pajecha mamaira mashoma kure nemoto. Ainge ave kutorara paakaona mbeva mbeva ichisvika pamoto. Yakadya coconut kubva pamoto miviri yekutanga uye, painge yave kuda kudya coconut kubva pamoto wechitatu, Detora akaibata uye anga achiiuraya. Asi mbeva ikateterera Detora kuti arege kuiuraya. 'Ndirege ndiende, ndokumbira kukuudza chimwe chinhu' yakadaro. Detora akaregedza mbeva iya, iyo yakatanga kutiza isina kuchengeta vimbiso yayo. Detora akabata mbeva zvakare, uye achinhonga chimuti chidiki chakapinza chedanda, akatyisidzira kubaya nemumaziso embeva nayo. Mbeva yakatya ikati, 'Gudusira dombo riya pamusoro pebwe zihombe uone zvarinowana'. Detora akabvisa dombo ndokuwana nzira inotungamira pasi pevhu. Achipinda mugomba, akapinda nenzira yakamanikana kusvika asvika munzira ine vanhu vaifamba-famba.
Detora akatadza kunzwisisa mutauro wavakataura. Pakupedzisira akawana pane murume wechidiki aitaura mutauro wake, uye kwaari Detora akataura nyaya yake. Jaya iri rakamunyevera pamusoro penjodzi zhinji dzenyika itsva, ndokumutungamira munzira yake. Detora akasvika pakupedzisira kune imwe nzvimbo kwaakaona chikuva chakafukidzwa nematepeti akanaka ezvigadzirwa zvakanaka. Pachikuva paigara Mambokadzi Louse, nevashandi vake vakamukomberedza.
Vahosi vakatambira Detora, ndokudanana naye. Apo, mushure memavhiki mashoma, Detora akashuvira kudzokera kumba, iyo Louse-Queen haina kumutendera kuti aende. Asi, pakupedzisira, paakamuudza nezvevakoma vake vana pasi pebwe vaisakwanisa kusunungurwa kunze kwekushopera kwake, akamutendera kuti aenderere mberi. Vanoverengeka vevanhu vaakasangana navo vaida kuita zvakaipa kumuenzi uyu, asi Detora akavakunda vese nemashiripiti.
Yekupedzisira vakauya kudombo kwaive kwasiya Detora vakoma vake. Akakotama, akadzokorora mashiripiti, uye dombo hombe rakachinja kuita igwa rine hama dzake ina. Pamwe chete hama dzakasimuka kuenda kunyika yavo.
Mushure memazuva mazhinji vari mugungwa, vakaona chitsuwa chekumba chiri kure. Sezvavaisvika pairi, Detora akaudza hama kuti aizovasiya ndokudzika kunogara navanasekuru vavo pasi pegungwa. Vakaedza kumunyengerera kuti agare navo, asi akasvetukira padivi pechikepe, iye ndokudzika. Idzo hama dzakapinda munzira kuenda kuvabereki vadzo ndokurondedzera zvavakaita.
Detora paakasvika pamba pambuya nasekuru vake, vakamugamuchira zvakanaka. Mushure mekufa kweasekuru nasekuru, Detora akave mambo weGungwa uye neMweya Mukuru weHove neVaredzi. Uye mazuva ano, pese panoraswa hove kana zvikorekedzo kubva muchikepe, zvinozivikanwa kuti varere padenga reimba yaDetora.